ဥရောပ ပြိုင်ပွဲ ပိတ်ပင် ခံထားရတဲ့ မန်စီးတီးရဲ့ နောက်ထပ် ပြဿနာ - BBC News မြန်မာ
ဥရောပ ပြိုင်ပွဲ ပိတ်ပင် ခံထားရတဲ့ မန်စီးတီးရဲ့ နောက်ထပ် ပြဿနာ
16 ဖေဖော်ဝါရီ 2020
Image caption ချန်ပီယံလိဂ်ကနေ ၂နှစ်ဆက် လွဲချော်ရမယ့် မန်စီးတီး
ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ မန်စီးတီးအသင်း ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ ဥရောပ ပြိုင်ပွဲတွေ ကို နှစ်နှစ်တိတိ ကစားခွင့် ပိတ်ပင်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက ဘောလုံး လောကကို တော်တော်လေး ရိုက်ခတ်စေခဲ့ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ၂၀၁၂ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၆ခုနှစ်အတွင်း UEFA ရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို ချိုးဖောက်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ရက်နေ့ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ မန်စီးတီးဖက်ကတော့ ဥရောပ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဆွစ်ဇာလန်က အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ အားကစားခုံရုံအထိ အယူခံဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့သလို အသင်းပိုင်ရှင် ရှိတ် မန်ဆော်ကိုယ်တိုင် အသင်းကို ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေအတွက် နောက်တ ရစရာမရှိဘူးလို့ တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ စီးတီးဟာ ၂နှစ်ပိတ်ပင်ခံရမှုကြောင့် စနေနေ့က အသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကို အရေးပေါ် အစည်းအဝေးပွဲ တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မန်စီးတီး ဘာကြောင့် ပိတ်ပင်ခံရတာလဲ?
၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ ထိုးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ဆီကနေ အဘူဒီဘီ စီးပွားရေး အုပ်စု တစ်ခုက မန်စီးတီးကို စတင်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း လက်ရှိ အချိန်အထိ စုစုပေါင်း ပေါင် ၁.၈ ဘီလျံအထိ အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးဟာ အစောပိုင်း ကာလအတွင်း အသင်းကို တည်ဆောက်နေချိန်မှာ ငွေတွေများစွာ သုံးခဲ့တာက အခုလို ပြဿနာဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ မန်စီးတီးဟာ UEFA ရဲ့ FFP စည်းမျဉ်း ချိုးဖောက်မှုကြောင့် လာမယ့် ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီနဲ့ ၂၀၂၁-၂၂ ရာသီ ဥရောပ ပြိုင်ပွဲတွေကို ပိတ်ပင်ခံရတဲ့ အပြင် ဒဏ်ကြေးအဖြစ် ယူရိုသန်း ၃၀ကိုလည်း ဆောင်ရမှာပါ။ စီးတီးဟာ ငွေကြေး ပိုမို သုံးစွဲခွင့်ရဖို့အတွက် အသင်းရဲ့ စပွန်ဆာ ဝင်ငွေတွေကို အသုံးချပြီး UEFA ကို လှည့်ဖြားခဲ့တာကြောင့် CFCB က စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီး ပြစ်ဒဏ်ချခံရတာပါ။
Image caption မန်စီးတီးဟာ ယူရိုသန်း ၃၀ကို ဒဏ်ရိုက်ခံထားရသလို လိဂ် ၂အထိပါ တန်းဆင်ရဖွယ် အရေးနဲ့ ရင်ဆိုနေရတာပါ
FFP ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်းဆိုတာ ဘာလဲ ?
FFP စည်းမျဉ်းဆိုတာကတော့ ဥရောပ ဘောလုံးလောကအတွင်း ကလပ် အသင်းတွေ အနေနဲ့ လိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ တရားမျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းပါ။ ၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွေမှာ ဥရောပကလပ်တွေရဲ့ ငွေသုံးမှုကို ကြည့်ပြီး ပြောင်းလဲမှုများစွာနဲ့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ စည်းမျဉ်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ကလပ်အသင်းတွေဧာ ဝင်ငွေနဲ့ အသုံးစရိတ်ကို မျှမျှတတ သုံးစွဲရအောင် ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အပိုသုံးစွဲတဲ့ အသင်းတွေကို UEFA က ပြစ်ဒဏ်တွေ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ချမှတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
၂နှစ်ပယ်အတွက် မန်စီးတီးဖက်က ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲ ?
မန်စီးတီးဖက်ကတော့ UEFA က ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံထားရပြီးနောက် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံက အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ အားကစား ခုံရုံးမှာ အယူခံဝင်သွားမှာဖြစ် တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ မန်စီးတီးရဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ " ဥရောပ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် စိတ်ပျက်ရပေမဲ့ အံ့အားသင့်ခြင်းတော့ မရှိဘူး"လို့ ထည့်ရေးထားခဲ့ပါတယ်။ ကလပ်အသင်းက ဒီဖြစ်ရပ်အတွက် မီဒီယာတွေကို ဖြေကြားခြင်း၊ သတင်းထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပေမယ့် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မန်စီးတီး မပါတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်က ပရီးမီးယားလိဂ် ဝင်ခွင့် ?
ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ပရီးမီးယားလိဂ်ကတော့ ၄သင်းအထိ ပါဝင်ခွင့်ရထား တာကြောင့် တကယ်လို့ မန်စီးတီးဟာ အယူခံမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ်က အဆင့် ၅ရတဲ့ အသင်းက ချန်ပီယံလိဂ်ကို မန်စီးတီးကိုယ်စား ဝင်ခွင့်ရမှာပါ။ မန်စီးတီဟာ ဥရောပ ပြိုင်ပွဲတွေ အားလုံးမှာ ပိတ်ပင်ခံထားရတာကြောင့် ဒီနှစ်ရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဥရောပ စူပါဖလား၊ ကမ္ဘာ့ကလပ် ပြိုင်ပွဲတွေကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်သလို ချန်ပီယံလိဂ် သရဖူကိုလည်း ကာကွယ်ခွင့်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Image caption ၂ဝ၂ဝခုနှစ်အထိ စာချုပ် သက်တမ်းကျန်သေးပေမယ့် ရာသီကုန်မှာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖွယ်ရှိနေတဲ့ ဂွါဒီယိုလာ
နောက်ထပ် ဘာတွေ ပြစ်ဒဏ်ချခံရဖွယ်ရှိလဲ?
ဗြိတိန်နာမည်ကြီး သတင်းစာ Independentရဲ့ အဆိုအရ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဥရောပ ပြိုင်ပွဲတွေကို ၂နှစ် ပိတ်ပင်ခံထားရချိန် အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတောင် ရမှတ်လျော့ခံရမှုနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ UEFA က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြစ်ဒဏ်တွေ ချမှတ်နေချိန် အင်္ဂလန် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖက်က ၂၀၁၄ခုနှစ် မန်စီးတီး ရထားတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆုကိုပါ ပယ်ဖျက်မယ်လို့လည်း သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားသလို လက်ရှိ ပြိုင်ပွဲကနေ အမှတ်လျော့ပြစ်ဒဏ်ကနေ၊ အဆိုးဆုံး လိဂ် ၂အထိ တန်းဆင်းခိုင်းမယ့် ပြစ်ဒဏ်အထိ ချခံရဖွယရှိနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့တာပါ။
မန်စီးတီးဖက်က ဘယ်လို့ ရပ်တည်မလဲ ?
မန်စီးတီး ပိုင်ရှင် ရှိတ်မန်ဆော်ကတော့ အသင်းကို ပေါင် ၂ဘီလျံနီးပါ သုံးထားသလို UEFA ဖက်က ပြစ်ဒဏ်ချခံ ထားရပေမယ့် နောက်တမရကြောင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ရှေ့နေတွေကို ငှားပြီး နောက်ဆုံးအချိန်အထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ UEFA ကိုလည်း တရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အဲ့ဒီအတွက် လုပ်ဆောင်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ မန်စီးတီးဟာ သူတို့ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်အတွက် အယူခံကို စတင်ဝင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပြနဲ့ ကစားသမားတွေရဲ့ အနာဂတ်?
မန်စီးတီးရဲ့ ပြဿနာတွေက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နည်းပြ ပတ်ဂွါဒီယိုလာရဲ့ အနာဂတ်ကို မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ထုတ်စေသလို ကစားသမားတွေကိုလည်း ထိန်းဖို့ ခက်ခဲနိုင်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ ပတ်ဂွါဒီယိုလာ တစ်ယောက် အသင်းမှာ ဆက်ရှိဖို့ မသေချာသလို သူရဲ့ အနာဂတ်ကို ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်မလဲ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ရီးယဲယ်မက်ဒရစ်က စတာလင်ကိုလည်း ပေါင် ၁၈၀သန်းနဲ့ ခေါ်ယူမယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြနေသလို စီးတီး သမားတွေအားလုံးကလည်း အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မန်စီးတီးဖက်ကတော့ သူတို့ဖက် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို လုပ်ဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။